Tababar Loo Qabtay Umuliso Dhaqameedada - Cakaara News
Tababar Loo Qabtay Umuliso Dhaqameedada
Dhanaan( cakaaranews )Jumce 1da April 2016,Tababar ujeedadiisu ahayd casriyaynta iyo waliba isku xidhka bulshada, xarumaaha caafimaadka iyo umuliso-dhaqameedada ayaa si habsami leh looga bilaabay Degmada Dhanaan ee Gobalka Shabeele.
Hadaba tababarkan oo looqabtay umulisoyin tiradoodu dhantahay 11 umiliso islamarkaana ka kala yimid qabaleeyada hoos yimaada Degmada Dhanaan ayaa Waxaa furitaankiisii kahadlay Kusimaha Gudomiyaha Degmada ahna Madaxa Xafiiska Caafimaadka mudane Maxamed Aadan oo sheegay in tababarkani uu yahay mid kor loogu qaadayo xirfada aqoomeed ee u- mulisooyinka islamarkaana uu yahay mid larabo in fahan buuxa lagasiiyo umulisooyinka dhinaca iskuxidhka hooyada uurka leh iyo xarumaha caafimaadka.
Dhanka kale wuxuu xusay masuulku in larabo in umulisooyinku ay noqonayaan kuwo mushaar qaata kadib marka aqoonta casriga ah ee caafimaadka fahanbuuxa kaqaataan islamrkaana ay kashaqaynayaan xarumaha iyo rugaha caafimaadka.
Sidookale waxaa tababarkan ka hadlay Madaxa Arimaha Xisbiga Degmada Dhanaan mudane Xassan Bashiir oo sheegay in tabarabarkan ay ujeedadisu tahay isku xidhka bulshada iyo xaruumaha iyo ruugaha caafimaadka degmada iyo waliba in aqoonta Umulisooyinka ee ku aadan xirfadooda kor loogu qaado, lana cidhib-tiro in ay hooyo ku u musho banaan ama guri islamarkaana ay hoyooyinka uurka leh ku u mulaan xarumaha caafimaadka si looga hor-tago dhiig-baxa xiliga umusha.
Ugudanabayna waxaa dhinacooda kahadlay umulisooyinkii tababarka qaadanayay oo sheegay in ay aad usoo dhawayanayaan casharadan ay barteen islamarkaana ay aqoonbadan korodhsadeen iyagoo tilmaamay in ay raacayaan kuna dhaqmayaan casharadii ay barteen.